Dzima otomatiki Apple Music kuvandudza | IPhone nhau
Deactivate iyo otomatiki kuvandudzwa kweApple Music uye usawane kutya
Apple Music iri kutotamba munyika dzinopfuura zana uye vazhinji vedu tiri kunakidzwa nemwedzi mitatu-yakazara muedzo webasa. Ichokwadi ndechekuti yakanaka kwazvo asi, kana iwe wakaita seni, zvirinani izvozvi, Zvinogona kunge zvisingaite kunge zano rakanaka kuti mukati memwedzi mitatu iwe uchaona kuchaja kwe € 9.99 pakadhi rako inosangana neApple ID yako. Izvi hazvishandi kune vatengi vemimhanzi vane hukasha avo, kuve nechokwadi chekuti vanoda kubhadhara sevhisi, kuita sarudzo yakamisikidzwa ichave yakasununguka kwavari.
Parizvino, zvinoita senge zano rakanaka kwandiri uye ndinofunga zvakanakisa kana tikadzora otomatiki kuvandudza. Ini ndinotenda kuti mumwedzi mitatu pachave nenguva yekudzosera maitiro kana tichida. Kana zvisina kudaro, tinogona kuva nechokwadi chekuti havazombotibhadharisa. Muchikamu chino isu tinokuratidza panoshanduka switch izvo iwe zvaunoona mumufananidzo pamusoro pemitsara iyi.
Sarudzo yekudzima otomatiki kuvandudzwa yakambovanzika. Ini ndinofunga Apple yaifanira kunge yakaita kuti iwedzere kuwanikwa, asi ini ndinonzwisisa kuti zvese muhupenyu bhizinesi. Izvo hazvireve kuti zvinoita sekunge kwandiri kuti Apple yaita zvisirizvo nekuviga iyi sarudzo kubva kwatiri, kunyangwe isina kunyatso kuvigwa futi. Kuimisa, tichafanirwa kuita zvinotevera.
Maitiro ekudzima otomatiki Apple Music Renewal
Isu tinovhura Music application.
Tinobaya pamusoro icon.
Tinobaya tarisa Apple ID.
Mu SUBSCRIPTIONS, tinobata Manage.
Isu tinoremadza switch.
Kuti tinyore zvekare, tinobata pamusoro peimwe yemitengo yemhando mbiri idzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Deactivate iyo otomatiki kuvandudzwa kweApple Music uye usawane kutya
Zvakanaka, pandakaisa Apple mimhanzi ndakawana poster ndikati kwete maita basa, izvozvo zvinodzima kunyorera here?
Alfonso Zven Kruspe akadaro
Iwe unofanirwa kubhadhara kune 3-mwedzi kunyorera?
Pindura kuna Alfonso Zven Kruspe
Veronica ximena akadaro
Mwedzi mitatu mahara .. Nenzira imwecheteyo, zvinoita kuti unyore kuitira kuti kana mwedzi mitatu yapera, ndikubhadharise mwedzi unotevera .. Asi kana iwe ukaita zvarinotaura pano, hazvizokubhadharise kunze kwekunge iwe kuripa
Pindura Veronica Ximena
Asi zvakadaro ini ndinofanirwa kuisa iyo data yekadhi rechikwereti?
Hongu, edza kuisa sarudzo «hapana» panzvimbo yesarudzo yemakadhi uye haimire, saka ini ndaifanirwa kuisa data rekadhi uye mwedzi mitatu inoitwa, saka zvakakosha kudzora otomatiki kuvandudzwa, kuitira kuti kana wapedza iyo 3 yemahara mwedzi usakubhadharise kwemwedzi wechina ..
Manuel Linares chinobata mufananidzo akadaro
Tenga iyo itunes kadhi uye ini ndakazviita sezvizvi
Pindura kuna Manuel Linares
Ngirozi Eduardo Miranda Merida akadaro
Kana uchifanira, uye izvo zvinondishamisa 🙁
Pindura kuna Angel Eduardo Miranda Mérida
zvakanaka hongu: /
Zvakanaka, ndatenda Pablo!
David ismael rodriguez akadaro
Pindura kuna David Ismael Rodriguez
Jose miranda akadaro
Pindura kuna Jose Miranda
iTunes 12.2 inowanikwawo nguva yapfuura. Chimwe chinhu chitsva chakaitika kwandiri, ndanga ndichiteerera mimhanzi paTunes, uye pa iPhone ndakavhura radio kuti nditeerere kune runyorwa, uye paMac ndakawana hwindo richiti mimhanzi iri kuridzwa pane chimwe chishandiso kana ndichida enderera kana kwete.
Paul Bailon Wilches akadaro
Pane chero munhu anoziva nei vachindichaja $ 8.99 yehurongwa hwemhuri? Chero kukurudzira kana chimwe chinhu? Haha
Pindura kuna Paul Bailon Wilches
Ivo vanotumira email ine chinongedzo chekumisa otomatiki kuvandudzwa pavanongobvuma iyo yemahara kuyedzwa yemuapuro mimhanzi
Kana iwe usina nzira yakasimbiswa yekubhadhara muapuro, zviri pachena kuti ivo havazobhadharisa chero chinhu uye ivo havazobhadharisa chero chinhu !!! Izvo hazvindipe iyo sarudzo ye otomatiki kuvandudzwa nekuti ini handina nzira yekubhadhara !!! Saka avo vari kwandiri havazofaniri kunetseka!
Ini ndinofungidzira kuti imhosva iyo Apple inoita kuti iongorore iyo account uyezve inozoidzosera kwauri mumazuva matatu kana chimwe chakadai.
Alejandro Llerena akadaro
Ndiwo mutengo weSouth America, nekuti Spotify zvakare ine mitengo yakaderera yeSouth America.
Pindura kuna Alejandro Llerena
Aaron Abensur akadaro
Asi ichiri iyo imwecheteyo catalog?
Pindura kuna Aaron Abensur
Rigosi Ricardo González Silva akadaro
Pindura Rigosi Ricardo González Silva
Francisco Jose Matus Palma akadaro
IZVI UNOFANIRA KUTI UVE NEAPP, APPLE MUMhanzi WAKAISWA KANA KUTI UNOFANIRA KUTAURA ITUNES ZVIRI KUFAMBA?
Pindura kuna Francisco Jose Matus Palma
Ehe, iyo catalog inenge yakafanana, kunyangwe dzimwe nguva pre-maodha anosvika pakutanga muSouth America
Iyo yemahara nguva yakatanga nezuro kana pawakaimisikidza?
Ini ndiri muna 8.3 uye ini handidi kuodha chete yemumhanzi app.
Kana iri yemahara kubva nezuro wobva wavhura kuti uise kuti uzviedze
Elena Malagon Picon akadaro
Ini handisi kuwana pekumisa iyo?
Pindura kuna Elena Malagon Picon
Jesu Bryan Calderòn Fernàndez akadaro
Ini hapana chandinowana kubva pandinoisa pavanondiudza kuti ndiise pamakadhi ini handina kana nekuti ini ndichiri ndisina izvo zvakanaka zvakaipa ???
Pindura kuna Jesùs Bryan Calderòn Fernàndez
Ngirozi Luis akadaro
zvavanotsanangura apa hazvibude
Pindura Mutumwa Luis
sezvo zvadzimwa. mumwe munhu anoziva
Sandra Rodriguez Burgos akadaro
Ndatenda! Rwakanaka sei ruzivo urwu rwakauya kwandiri 😀
Pindura Sandra Rodriguez Burgos
Kubhadhara nekadhi reTunes kunoshanda here?
URGE: Nekunyoreswa kweApple Music, ndichakwanisa kuenderera mberi ndichienzanisa mimhanzi iyo yandaive nayo muraibhurari yangu yeTunes?
david mora akadaro
Ndakaita kunyoreswa kwemwanasikana wangu uye ivo vakandibhadharisa nechaji kukadhi rechikwereti, mungandibatsira here kuti ndizive kuti nei vabhadharisa uye ndingakumbire sei mari iyoyo? Ndatenda.
Pindura kuna david mora
Ini ndaita iyo activation uye ini ndinobhadharisa 100.11 kukadhi rangu rechikwereti, nei? Zvakare, haana kundipa iyo 3 mwedzi mahara!
iTunes inogadziridzwa kune vhezheni 12.2 uye inosanganisira kusangana neApple Music
TaiG inovhura vhezheni nyowani yemajeri ayo anoenderana neIOS 8.4